Chain Link Kucingo olubiyele - China Hebei Samsung Metal wocingo
Chain Link Kucingo olubiyele kwakhona igama diamond wocingo kunye ukuvulwa diamond. Yenziwe nge iingcingo metal ezahlukeneyo lazo ngomatshini kocingo link chain. izinto zethu ucingo link chain ezifumaneka insimbi, iqaqanjiswa, kunye PVC camera ucingo. ngokuqhelekileyo zisetyenziswa emiyezweni, iyadi ezemidlalo, iziza mveliso, izindlu, iindlela kunye neziganeko ukulawula abantu. UkuThunga Iimpawu: lokuvula Uniform, umphezulu tyaba, elula ukwaluka kunye nokusetyenziswa practical. Easy and obunokuguquka nokufakwa connecting. Pepa ...
Min.Order Ubungakanani: 100 Meter / zokulinganisa
Supply Amandla: 80000 Meter / zokulinganisa Inyanga nganye
Chain Link Kucingo olubiyele kwakhona igama diamond wocingo kunye ukuvulwa diamond. Yenziwe nge iingcingo metal ezahlukeneyo lazo ngomatshini kocingo link chain. Izinto zethu ucingo link chain ezifumaneka insimbi, iqaqanjiswa, kunye PVC camera ucingo. Ngokuqhelekileyo zisetyenziswa emiyezweni, iyadi ezemidlalo, iziza mveliso, izindlu, iindlela kunye neziganeko ukulawula abantu.
ukuThunga Iimpawu: lokuvula Uniform, umphezulu tyaba, elula ukwaluka kunye nokusetyenziswa practical. Easy and obunokuguquka nokufakwa connecting. Traditional Chain-Link Fencing kulukhetho ofanelekileyo ukuba,, iingcingo smart ekhuselekileyo kumda kushishino. Yokuvelisa yemizi-link chain iingcingo hot-nkxu Isefu, PVC wawutyabeka kwaye iingcingo insimbi. Ethandwa kakhulu iqaqanjiswa ucingo link chain, enokumelana okulungileyo amanzi umhlwa komoya. Noko ke, PVC camera iyahlala link chain ilunge ngaphezu uthango kwalenza.
Chain Link Kucingo olubiyele Edge Types
Kukho iintlobo ezintathu edge ukukhetha: ngenqindi - ngenqindi, twist - jija okanye ngenqindi - twist. Ucingo link Chain kunye twist kudla yongeza ukhuseleko.
Knuckling - Eli gama lisetyenziswa ukuchaza uhlobo selvage ezifunyenwe yi ezinxityelelanisiweyo ngababini ezikufutshane luphela ucingo koko ayeguqa wire iphela emva ibe loop elivaliweyo. Ngokuqhelekileyo ngenqindi yinto eqhelekileyo ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela.
Linegunya - Eli gama lisetyenziswa ukuchaza uhlobo selvage ezifunyenwe zijije ngababini osecaleni wire ziphile ndawonye kweleli okuvala 1-1 / 2 amathuba umatshini, nto leyo ilingana ilenze ezintathu ngokupheleleyo, kwaye cuffing kwicingo uphela ngexesha elibukhali engile ukunika amanqaku ezibukhali. Ucingo iphela ngaphaya twist liya kuba ngama 1/4 intshi (6.4mm) elide.
Chain Iinkcukacha Link Fence:
Chain Link Fence Izikhankanyi: Wire ubukhulu 1.2mm - 5.0mm,
mesh ubungakanani 20mm -100mm
ububanzi Roll-0.5m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.5m
ubude Roll 10m-50m .
Yeyiphi ucingo ndifanele kuthenga, iqaqanjiswa okanye PVC camera ukubiya chain-link?
Ukuba ufuna ucingo link chain wema iminyaka 30-40, ngoko kufuneka uthenge kuphela ucingo kunye ucingo sangqa 3mm - 4mm. Ukuba ufuna ukuba nenkangeleko nomtsalane ngakumbi kufuneka uthenge ucingo PVC camera. Nje kufuneka ngokukhuselwa umhlwa, ungakhetha ucingo kunye kwalenza. Ukuba uceba ukusebenzisa ucingo ibe bume ezinobutshaba: kufuphi nolwandle okanye kwindawo mveliso asidi. Nceda uthenge ucingo camera link chain PVC. Ngokuba umoya ityuwa ulwandle kunye nomoya acid ngokukhawuleza kakhulu zomhlaba ezinokudla nezinki ngaphezulu, kodwa azikwazi ukumelana ukutyabeka Polymer.
Previous: Ezinamacala wocingo
Okulandelayo: Aluminium Window Screen
Electro Chain kwalenza Link Fence
Hot nkxu Chain kwalenza Link Fence
PVC Chain Camera Link Fence
Staninless Steel welding wocingo